«BE ATIDOHA !» -
AccueilTresaka«BE ATIDOHA !»
«BE ATIDOHA !»
13/01/2017 admintriatra Tresaka 0
Misy olona mahay lalàna ary tena mampiseho izany fahaizany lalàna izany mihitsy rehefa miresaka sy manao fanadihadiana kanefa lasa « mamp’me » tampoka ao anatin’ny fotoana tsy ampoizina noho ny fiarovana ireo nitifitra nahafaty ny zandary G2 Rado sy ny bizna manodidina izany rehetra izany. Taiza indray no nisy « clerc » afaka hanao ny asan’ny vadintany na atao aza hoe nahazo fahazoan-dalana manokana tahaka ny inona! Eo ihany izay resaka izay, fa ilay vadintany tena mizaka izany andraikitra izany, Rakotobenoely Clovis, no efa nanao fampilazana manerana ny ambaratongam-pahefana eny anivon’ny Fitsarana fa tsy misy olona afaka mampiasa ny fitomboka sy ny anarany intsony aorian’ny faha-7 Novambra 2016.
Misy « be atidoha » mihitsy eto amintsika eto ary mihevitra ny olona ho tsy mahay izany lalàna izany. Voaporofo hoy ny lahatsoratra tao amin’ilay gazety mpomba ireo mpanongam-panjakana fa lainga avokoa no voalazan’ny mpiaro fitondrana. Ny filazana ny marina tsy midika ho fiarovana fanjakana velively. Fitoriana roa sosona no napetraky ny vadintany Rakotobenoely Clovis teny anivon’ny Fampanoavana: fitoriana ireo rehetra mampiasa ny anarany sy ny fitomboka talohan’ny 7 Novambra 2016 ary fitoriana ireo izay nanao ilay “signification” tamin’ny anaran’i Jean Yrmand tamin’ny 21 Desambra 2016, laharana 066-PRT/Plainte/17 tamin’ny 10 Janoary 2017. Inona no lainga amin’izany? Tsy nametraka fitoriana indray ve izany ity vadintany ity?
Tsy hosoka sy fampiasana hosoka àry ve izany ny fampiasana anarana sy ny fitomboka efa voalaza fa tsy azo ampiasaina intsony? Tsy mila olona manam-pahaizana be dia afaka mamaly io fanontaniana io amin’ny teny tsotra sy mahitsy manao hoe: eny hosoka sy fampiasana hosoka izany! Fa eto amintsika moa misy “be atidoha” mihevitra ny olona ho vendrana ary kinga amin’ny fanodinkodinana saim-bahoaka.
Ady amin’ny dahalo : Ahetsika ireo « tireurs d’élite » mampiasa Dragonov
Tafiditra amin’ny laharam-pahamehan’ny fitondram-panjakana ny ady amin’ny asan-dahalo. Raha ny nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, tsy maintsy atao ny ezaka rehetra amin’ny hamongorana ny asan-dahalo eto amin’ny firenena. Noho izay indrindra, nisy fanazaran-tena sy sarin’ady ...Tohiny
Antananarivo : Niampy 76MW ny famatsiana herinaratra
Vondrona Eoropeanina : Miaiky amin’ny fananan’ny Filoham-pirenena fisokafana
Filoha Hery Rajaonarimampianina:“ IZAY NAMPANANTENAIKO TSY MAINTSY TANTERAHAKO ”